Assessment Centre | National Employment & Skill Development
Total Visit : 9932
စဉ် ကုမ္ပဏီအမည် (သို့) သင်တန်းကျောင်း စစ်ဆေးမည့်အလုပ်အကိုင် အမျိုးအစား၊ အရေအတွက် ကုမ္ပဏီလိပ်စာ
၁ Skills Training Center (Yankin) ၄ 1. Air-Con Installer (Level-1) 2. Air-Con Installer (Level-2) 3. Electrician (Level-1) 4. Caisher (Level-1) အမှတ် (၂၉၈)၊ မြနန္ဒာလမ်း၊ (၁၃) ရပ်ကွက်၊ ရန်ကင်းမြို့နယ်။
၂ CVT (မြောက်ဒဂုံ) ၇ 1. Electrician (Level-1) 2. Electrician (Level-2) 3. Caisher (Level-1) 4. Cabinet Making (Level-1) 5. Cabinet Making (Level-2) 6. Waiting Staff (Level-1) 7. Sale Person (Level-1) သစ်အခြေခံစက်မှုနည်းပညာ စက်မှုသင်တန်းကျောင်း အမှတ်(၆၇၄)၊ ၃၆ ရပ်ကွက်၊ မြောက်ဒဂုံ။
၃ TRC Hotel and Vocational Training School ၁ 1. Waiting Staff (Level-1) အမှတ်(၂၀၉)၊ အခန်း(၁၀၁)၊ ကမ္ဘာအေးဘုရားလမ်း၊ မရမ်းကုန်းမြို့နယ်၊ရန်ကုန်မြို့။
၄ Moonsoon Restaurant ၁ 1. Waiting Staff (Level-1)
၅ Mandalay Hotel and Vocational Training Institute ၂ 1. Waiting Staff (Level-1) 2. Room Attendant (Level-1) သိပံ္ပလမ်း၊ ၆၆ နှင့် ၆၈ လမ်း ကြား၊ မဟာအောင်မြေမြို့ နယ်၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး။
၆ ဆောက်လုပ်ရေးသင် တန်းကျောင်း (သုဝဏ္ဏ) ၅ 1. Carpenter (Level-1) 2. Carpenter (Level-2) 3. Brick Layer (Level-1) 4. Brick Layer (Level-2) 5. Tiler (Level-1) မြဝတ်ရည်လမ်း၊ (၂၉)ရပ်ကွက်၊ သုဝဏ္ဏ၊ သင်္ဃန်းကျွန်းမြို့နယ်။
၇ ကမ္ဘာသင်တန်း ကျောင်း ၁ 1. MMAW Welder (Level-1) အမှတ် (၄၁)၊ ၆ လမ်း၊ ရန်ကုန်စက်မှုဇုံ။
၈ Arbourfield Training Center ၃ 1. MMAW Welder (Level-1) 2. MMAW Welder (Level-2) 3. GMAW Welder (Level-1) အမှတ်(၂၉၆၄)၊(ည+ဋ)၊ စက်မှုလမ်း၊ (၆၃)ရပ်ကွက်၊ တောင်ဒဂုံမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့။
၉ စက်မှုသင်တန်းကျောင်း (ဆင်တဲ) ၂ 1. MMAW Welder (Level-1) 2. Machinist (Level-1) အမှတ်(၁)စက်မှုသင်တန်း ကျောင်း၊ ပန်းတောင်းမြို့နယ်၊ ပြည်ခရိုင်၊ ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး။
၁၀ အမှတ်(၂)စက်မှုသင် တန်းကျောင်း(မန္တလေး) ၂ 1. MMAW Welder (Level-1) 2. Small Engine Mechanic (Level-1) ဒေါနဘွား၊ အောင်မြေသာဇံ မြို့နယ်၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး။
၁၁ အမှတ်(၄)စက်မှုသင် တန်းကျောင်း(ပခုက္ကူ) ၂ 1. MMAW Welder (Level-1) 2. GMAW Welder (Level-1) ချောက်ကန်ကျေးရွာ၊ ပခုက္ကူမြို့နယ်၊ မကွေးတိုင်းဒေသကြီး။
၁၂ မြန်မာနိုင်ငံအထည် ချုပ်လုပ်ငန်းလူစွမ်း အားအရင်းအမြစ် ဖွံ့ဖြိုးတိုး တက်ရေး သင်တန်းကျောင်း ၂ 1. Garment Sewing Machine (Level-1) 2. Garment Sewing Machine (Level-2) အမှတ်၄၀၀(ခ)၊အောင်မင်္ဂလာဒုံလမ်းမ ကြီး၊စဉ့်ငူရပ်ကွက်၊အင်းစိန်မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး။
၁၃ Star Resources Tourism & Hospility Managenent ၁ 1. Room Attendant (Level-1) အမှတ်(၂၆၇)၊ အခန်း(၂၀၂)၊ ပြည်လမ်း၊ စမ်းချောင်းမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်။
၁၄ Holly Hotel Myanmar ၁ 1. Room Attendant (Level-1) သီရိရတနာလက်ကားစျေး၊ သုဓမ္မာလမ်း၊မြောက်ဥက္ကလာပမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့။
၁၅ စက်မှုတိုင်း (၁) စက်မှု လုပ်ငန်းခွင်သင်တန်း ကျောင်း ၁ 1. Foundry (Level-1) စက်မှုတိုင်း (၁) ဆည်မြောင်းနှင့်ရေအ သုံးချမှု စီမံခန့်ခွဲရေးဦးစီးဌာန၊၈၁/၂မိုင်၊ မရမ်းကုန်းမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသ ကြီး။
၁၆ GLORY Career Training Center ၁ 1. Automative Mechanic (Level-1) No6(A), LEI YAR, 4th Street, 10 North Ward, Tha Ke Ta Township,Yangon Division
၁၇ စက်မှုလယ်ယာဗဟို သင်တန်းကျောင်း (မိတ္ထီလာ) ၁ 1. Motorized Farm Mechanic (Level-1) မိတ္ထီလာမြို့။
၁၈ Sea Lion-Festo Industrial Automation Training Center ၁ 1. Pneumatic Technician (Level-2) အမှတ်(၁၁၃)၊ ဗိုလ်တစ်ထောင်ဘုရား လမ်း၊ ဗိုလ်တစ်ထောင်မြို့နယ်၊ ၁၁၁၆၁၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး။